Soddonka qodob ee awoodda – Maandoon
April 22, 2018 Cawil Cabdalle
Waxa aan halkan idin kula wadaagayaa soddon qodob oo ay ka sinaayeen dadkii dunida ugu saamaynta badnaa ama ugu awoodda badnaa. Giddigood waxaa laga soo dheegay lawxul-maxfuudka shaydaanka. Waxaana ka soo guuriyay nin la oran jiray Robert Geene. Aniguna iyadii oo Af-soomaali la soo gaabiyay ah ayaan idiin af-naqayaa
Ha isu muujin maamulahaaga: dareensii madaxdaadu in ay kaa sareeyaan, adiguna aad ka hoosayso. Ha u muujin kartidaada, waayo, waxa ay ku ridaysaa welwel ay ka qaadaan in aad bedesho. Mar waliba si ka badbadin leh u amaan madaxdaada marka aad horjoogto.
Aad ha ugu kalsoonaannin saaxiibadaa oo baro sida loogu shaqaysto cadawgaaga: Dadka, kuwa kuugu dhaw si fudud ayay kuu dhagri karaan, ee mar waliba ka feejignoow. Caddawgaaguse, markii aad shaqo siiso daacad ayay kuu noqon karaan.
Qari shucuurtaada: Ka ilaali dadka kale deganaansho iyo xasilooni ay kugu soo weeraraan. Mar waliba mushkilado aysan ka lug bixin ku oog.
Wax yar dheh marka aad hadlayso: Hadal cufan oo aan wax badan laga fahmi Karin ama lagu caajisiyo dheh marka aad xafladaha joogto, waayo, markii aad muujiso balaaqadaada indhaha dadka ayaa kugu soo jeensanaya, madaxdaadana ma farxad galinayso in aad ka hadal qurxoonaato.
Noloshaada oo idil waxa ay ku tiirsan tahay sumcaddaada, inta aad nooshahay ilaali: Marka ay caddawgaaga joogtana, iyada ka weerar. Qofka, haddii aad sumcadda ka disho si kama dambays ah ayaad uga guulaystay.
Qiimo walba ku bixi in aan maxkamad lagu gayn: Marka ay dadku badan yihiin wax waliba ayaad dhexdooda ku samayn kartaa adiga oo aan lagu aqoonsan. Dhex joog oo ku dhuumo saxmadda iyo yabaqa dadwaynaha. Haddiise aad gaar u baxdo si fudud ayaa laguu aqoonsan karaa.
Adigu magaca qaado, iyaguna shaqada ha qabteen: Dadka xirfadda iyo aqoonta leh ku adeego oo shaqadaada ha kuu qabteen. Waxba naftaada ha ku mashquulin wax aad helayso cid aad u dirato. Adigu, guusha un ku naallood marka ay timaaddo.
U soo jiido dadka sida shabaqa kalluunka: Dabin maran ha u dhigin cadawgaaga. Isticmaal baqshiish wixii aad heli karto , si ay siriqdaada ugu dhacaan.
Guulayso marka ay ficilka joogto: Waxba waqti ha isaga lumin in aad doodaha ku adkaato. Sharaxaaddaadu cid waliba ma gali karto balse, ficilka ayaa ah luuqadda ay cid waliba fahmi karto.
U diyaari dadka in ay kugu tiirsanaadaan: Ha barrin dadku la’aantaa in ay noolaan karaan. Mar waliba qof aan laga maarmin noqo. Marka aad wax barayso, xitaa, qaar ka reeb si aysan kaaga madaxbannaanaan.
Muuji daacadnimo gacan-ku-rimis ah iyo deeq joogto ah si aad cadawgaaga hubka uga dhigto: Wax siintu wax ay wiiqdaa feejignaanta iyo shakiga lagaa qaadi karo, waxa aynna dhisi kartaa buundada kalsoonida.
Qofkii aad caawimo uga baahan tahay, ha kaa dhex arko dantiisa. Waxaa la hubaa qof waliba in uu danayste yahay, laakiin, lama hubo qof waliba in uu naxariis badan yahay. Marka naxariis waxba ha ku doonin.
Ugu wehel yeel sidii saaxiib, laakiin, ha ka suulin jaajuusnimadaadi: Xogta waa la isku xukumaa. Meeshii aad joogtid iyo qofkii aad la joogtidba waa fursad, ee ha ku lumin, wax aan ahayn in aad sir hesho.
Ka takhalus cadawgaaga: Mararka qaar kuma filna in aad ka guulaysato oo kaliya. Haddii ay lagama maarmaan noqoto waa in aad dili kartaa.
Mar-la-arag noqo: In albaabkaagu furan yahay, markii lagu baahdana si fudud lagu heli karo waxa ay hoos u dhigaysaa haybaddaada. Maqnaanshahaagu wuxuu abuuri karaa hilow iyo xiiso laguu qaado.
Waxa aad noqotaa qof aan lahayn kob loogu soo hagaago: Bagteeriyada, marka la barto sida ay u shaqayso ayaa daawadeeda la samayn karaa. Wax aad noqotaa qof aan la saadaalin karin sida Jirjiroolaha.
Ha samaysan qalcado iyo dhufaysyo aad ku dhuumato: Tani waxa ay keenaysaa in aad go’doonto. Cadawgaaga dadka ugu soo dhex dhuumo.
Baro qofka aad tahay iyo qofka aad la dagaalami kartidba: Ha ku kadsoomin naftaada oo yaysan ku dhagrin awooddaadu. Markii lagaa taag roon yahay iyaga madaxa isu gali.
Adeegso xeeladda is-dhiibidda: Markii lagu hareereeyo waa doqonnimo in aad dagaallanto. Is-daad raaci si aan doqonnimo ahayn.
Si fiican u hubee naftaada: Baro xeeladda iyo aqoonta marin habaabinta ee lagama maarmaanka ah. Si aad u cayishidna waxa aad raadsataa sac buuran oo aad waligaaba maali kartid.
Dib u soo dhalo: Waxa aad yeelataa aragtida gorgorka, feejignaanta tukaha iyo sahanka goodirka.
Marna yaan caqiidadaada iyo iimaankaagaa laga shakiyin: Dadku haddii ay ogaadaan in aadan rumaysnayn waxa ay rumaysan yihiin waxa ay kuu arkayaan cadaw. Taas badalkeedana waa ay ku jeclaanayaan haddii aad u muuqato qof taqi ah. Haddii aad awooddo wax ka daji waxa ay rumaynayaan.
Wax waliba xamaasad ku gal wax aadan hubinna ha samaynin: Dadka xaqiiqo ha u sheegin laakiin si xamaasad leh ula hadal. Waayo, ma ay jecla kuwa fekera iyo kuwa wahsadaba, laakiin waa ay jecel yihiin dadka xamaasadda badan.
24: Guulahaaga ka dhig kuwo iska caadi ah: Qari guulahaaga oo qofna ha la wadaagin sidii ay ku suuro gashay guushaadu. Hana muujinin in aad dadaal dheer u soo gashay.
25: Ku taagnow habkaaga oo u dhaqan sidii boqorradii: Haddii aad ogolaato in aad hoosayso, hoos ayaa laguu eegayaa. Madaxdu madaxda ayay ixtiraamaan.
26: Baro xeeladda wakhtiga: Murtida ay saacaddu leedahay waa in aysan wax waliba mar kaliya wada dhicin. Ha deg-degin ee wax waliba sug waqtigooda saxda ah.
27: Aargoosigu ma ahan cabqarinimo: Shayga ura ee guusha fashiliya waa aargoosiga. Guul-daradana waa uu soo dedejiyaa. Cadowgaaga oo aad sheeg sheegtaana waxa ay kordhisaa awooddiisa. Wixii aad samaynayso mugdi ku samee. Marna yuusan muuqan khaladkaagu.
Sida aad rabto u fikir laakiin sida ay rabaan samee: Dadku ma doonayaan in aad ka duwanaato. Waxa ay wayneeyaan waynee oo sida ay u hadlaan u hadal si aad uga mid ahaato.
Ka fogow qadada lacag la’aanta ah: Wax yaabaha bilaashka ah aad bay u khatar badan yihiin. Ka cudurdaaro in lagu casuumo iyo in abaal lagugu yeeshaba.
Ari-jirka la dagaal si arigu u kala cararo.
Sharraxaad dheeraad ah iyo tusaalayaal halkaan ka daawo: https://www.youtube.com/watch?v=C6qI0hnyrpY
← Ustaad Maxamuud Maxamed Taha iyo sixidda fikirka Islaamka (1/3)
Islaamiyiinta Isbeddelka Badan Iyo Calmaaniyadda Qarsoon →